Galmudug oo ka shireysa sugidda amniga Shirka dowlad goboleedyada ee Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Galmudug oo ka shireysa sugidda amniga Shirka dowlad goboleedyada ee Dhuusamareeb
Galmudug oo ka shireysa sugidda amniga Shirka dowlad goboleedyada ee Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug, mudane Cali Dahir Ciid ayaa Shir guddoomiyay shirka Amniga Galmudug oo ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta maamulka Galmudug.
Shirkaan oo ay ka soo qayb galeen Wasiirka Maaliyada, La taliyaha Madaxweynaha Galmudug ee dhanka amniga iyo Saraakiisha Hay‘ada Nabad-sugida heer Galmudug saraakiisha Booliska ayaa waxaa diirada lagu saaray sare u qaadida amniga guud ee Galmudug iyo kan gaar ahaan Caasimadda Galmudug oo marti galinaysa Shirweynaha Dhusamareeb One.
Gunaanadka shirka Madaxweyne Cali Ciid ayaa faray laamaha Amaanka Galmudug in ay si weyn u adkeeyaan Amniga Caasimadda iyo degaanada ku xeeran.
Maamulka Galmudug ayaa Khamiista soo socota oo ay ku beegan tahay 9 ka Bisha July martigalinaysa Shir dhexmari doona Dowlad Goboleedyada Soomaaliyeed.
Shirkani ayaa waxaa la saadaalinayaa in uu Gogol xaar u noqdo qabsoomida Shirka Amniga Qaranka.
Shirka maamul goboleedyada ee Dhuusamareeb